Yemen: Mpanao Fihetsiketsehana Marefo Amin’ny Fanafihana Feno Herisetra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Marsa 2011 15:29 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Français, 繁體中文, 简体中文, English
Ampahany amin'ny tatitra manokana ataonay mikasika ny Hetsi-panoherana Yemen ity lahatsoratra ity.
Mitohy miditra amin'ny herinandro faha efatra ankehitriny ireo mpanao fihetsiketsehana mangataka ny fametraham-pialàn'ny Filoha Ali Abdullah Salehm ao Yemen. Tsy ahitàna soritra ny ho fialàna an-daharana mihitsy amin'ireo mpanao fihetsiketsehana ary ny Filoha Yemenita dia tsy mbola mihevitra ny handao ny toerany alohan'ny fifidianana filoham-pirenena hatao amin'ny 2013 .
Saleh dia niantso ny hery ara-politika rehetra hifampidinika. Nolavin'ny mpanohitra ny fanasàna. Mandritra izany fotoana izany, nitohy ny fanafihana ataon'ireo herim-pamoretana sy mpandàla an'i Saleh an'ireo mpanao hetsika ampilaminana.
“Amorain'ireo manampahefana Yemenita sy ny herim-pamoretana ny fanafihan'ireo jiolahim-boto mitam-piadiana an'ireo mpanao fihetsiketsehana am-pilaminana manohitra ny governemanta any amin'ireo toerana lavitra an'i Sanaa renivohitra, na mitazam-potsiny ry zareo rehefa misy ireny fanafihana ireny,” hoy ny Human Rights Watch.
Ny Alahady, Ibb dia vavolombelon'ny hetsika goavana manohitra ny governemanta izay nivadika ho fifandonana nahery setra rehefa nanafika ireo mpanao fihetsiketsehana ireo jiolahim-boton'ny governemanta ka nahafaty olona iray sy naharatràna olona ampolony.
Jane Novak manoratra hoe:
Ny hetsika androany tao Ibb dia vinavianina ho olona 200.000 ary misy herisetra mitranga koa any Aden. Ny hafa maminavina ny naratra tao Ibb ho tafakatra hatramin'ny 70.
Ireo mpanohana ny governemanta mitondra antsy sy basy poleta dia nanafika ireo mpanao fihetsiketsehana tany Atsimon'i Yemen tamin'ny Alahady, niteraka fahafatesana olona iray tanatin'ireo herinandro maro nanaovana hetsika hangatahana ny fametraham-pialàn'ny filoha.
Noha Zaki(@Izbella) nibitsika hoe:
Manafika ireo mpanao fihetsiketsehana ireo jiolahim-botom-panjakana naparitaka, ka nandratra 52, ary 6 no tena voa mafy mihitsy, tao amin'ny “Gulf of Freedom – Golfan'ny Fahafahana” any Ibb, #yemen.
Nahasambotra jiolahimboto ireo mpanao fihetsiketsehana, nibaboka io fa nokaramain'ny manampahefana ao amin'ny governemanta ry zareo – tsy misy valaka amin'izay niainana tany #Egypt
Ny 5 Martsa, nisy lahatsary iray nakarina tao amin'ny YouTube ahitàna ilay Yemenita iray mpanao fandraharahana antsoina hoe Wahb Eddine Al-Sururi nitaraina ho notafihan'ireo jiolahim-boto satria niala tamin'ny antokon'ny fitondrana ary nandray anjara tamin'ny hetsika ampilaminana tao Al Hodeidah.
Ao amin'ny pejy Facebook, ny Yemen Rights Monitors, Ahmed mitatitra hoe:
MAIKA | Manafika ny mpanao fihetsiketsehana ny herim-pamoretana, amin'ny fampiasàna herinaratra sy fandraofana ireo tranolay teo amin'ny fitorevahana tao #Sanaa #yemen #ArabRev
Aden To Freedom koa dia mitatitra hoe nampiasaina ny bala tena izy mba hanaparitahana ireo tanora mpanao fihetsiketsehana tamin'ny Alatsinainy maraina:
Androany maraina, tanaty filaharana ampilaminana avy any Al-Mansura sy Al-Shaikh, notifirin-dry zareo ny mpianatra. Nisy ny naratra tamin'ireo mpianatry ny ambaratonga ambony izay nidina an-dalambe hanameloka ny milina famoretana sy nitaky ny fialàna tsy misy hatak'andron'ny fitondrana ary izay rehetra momba azy. Nisy ihany koa ny fisamborana ny sasany tamin'ireo tanora nilamina ireo ary hatramin'izao aloha dia tsy manana antontan'isa mazava izahay momba ireo fifandonana. Homenay fanavaozam-baovao hatrany ianareo